bhimphoto: प्रज्वलनशील बस यात्रा
शीर्षक उही चिर-परिचित अति सुरक्षित भन्या जस्तो नै छ, जो हिजोका दिन इकान्तिपुरको ब्लगमा पढ्न मिलेको भन्ने ठान्नुभो भने ममाथि अन्याय हुन्छ भन्छु । गन्थन पनि उनै हुन नठान्नुस् । यता अलि सप्रसँग व्याख्याको प्रयास छ । तैपनि गन्थन त गन्थनै हो । तिनै ब्लग लेखनको लेखोटमाथि थपथाप । हिजो पोखरा फिर्दाको कुरा लेखियो, यसमा जाँदाका कुरा पनि समावेश छन् । फिर्दाका कुरा लेखेपछि लाग्यो, जाँदाका कुरा पनि त रमाइला थिए । आखिर जिन्दगी फ्याट्ट एक्सिडेन्टमा नपरुञ्जेल गज्जप-गज्जप देख्न-भोग्न मिल्छ/मिलेकै छ । अफिसको वेबसाइटमा प्रकाशित हुनेगरि लेख्दा भरसक छरितो लेखे निको मान्छन् भन्ने कुरा दिमाखमा घुमिरनी, अनि लेखमा लाग्या कति कुरो बिर्सिपठाउनी हुँदो रछ । नियन्त्रित अवस्थाको लेखाइ । भाषाका पनि सीमानामा बस्न पर्छ । नितान्त व्यक्तिगत गन्थन त डायरी जसरी आफ्नै ब्लगमा लेख्नुपर्छ भन्ने लागेर यताको जमर्को गरेको हो भनेर भन्नुस् ।
उसै पनि महान तथा गौरवशाली पर्व । घर जानै पर्छ । कारण- परिवार, मातापिता । जेठो छोरो दसैंमा कहिल्यै घरबाहिर रहेको इतिहास बनाउनु पाइएन । जान त जानु तर, कसरी पो ! म पोखरामा छु । घर विराटनगर । बीचमा मधेस आन्दोलित भाको क्षेत्र पर्छ ।
रौतहट-सर्लाहीका साथी शिव र अमनलाई फोन गरेँ । सोधेँ- मोटरसाइकलमा आउजाउ गर्दा कस्तो होला ? दुवैले अति उत्तम भने, केहीबेर उनीहरूकहाँ पनि रोकिन पर्ने सर्तसहित । कुरो ठीकै थियो । म बाटाउदी फोटा खिचिहिड्न रमाउने मनुवाका लागि मोसा यात्राभन्दा अरू रमाइलो के हुन्थो ! तर, बिगारो पेट्रोलले । त्यो पदार्थ नखुवाइ मोसा नकुद्ने । त्यो मोरोको हाहाकार । बल्लतल्ल प्रेसका नाताले ५ सयको पाइयो । प्लान त सक्सेस होला जस्तो भयो । हेटौडामा काका-बडाबाका घर छन् । त्यताका दाजुभाइलाई फोन लाएँ- 'म मोसामा घर जान लाग्या । ७/८ लिटर पेट्रोल खोज्द्याओ ।' उनीहरूले 'हुन्छ/आइज' भने । फेरि आफ्नै मनले भन्यो -'यति लामो बाटो त्यो जाबो स्प्लेन्डरमा के जान्छस् । दुःख हुन्छ । ढाड दुख्छ । फेरि उसैगरि आउन सक्लास् ?' यो बडो गम्भीर कुरो थियो ।
पोखराबाट काठमाडौं, त्यहाँबाट अरू विकल्प भएन भने पनि हवाइजहाजमा पुग्न त सकिन्थ्यो । तर, घरभन्दा टाढा रहेर ठिक्क-ठिक्क जीवन चल्ने पारिश्रमिकमा काम गर्नेका लागि हवाइभाडा महंगो । चाडबाडमा त्यसै पनि खर्च बढ्छ, किन पो खर्च बढाउनु । उता भाइले टीका लाएर एकादसीको दिनदेखि चार दिन सपरिवार कोलकाता घुम्न जाने योजना फिक्स गरेको एक महिनाअघि नै हो । यो मोरो नाकाबन्दी सुरू भएयता मलाइ इण्डिया घुम्न जान मनै मरेको हो । तैपनि भाइ र मेरा केटकेटीको रेल चढ्ने, साइन्स सिटी घुम्ने रहर । भाइलाई एकपल्ट 'होस नजाउँ, टिकट क्यान्सिल गरिदे' भनेको पनि हो । तर, क्यान्सिल गर्दा नि पैसो लाग्ने रैछ भनेर उ मानेन । जाने कुरा निश्चित थियो । अनि निश्चित बेलैमा घर जान नपाए मैले दसैंमा धेर दिन घर बस्न नपाउने पनि ।